Seminera Manolotra Fanadihadiana momba ny fampifanarahana ny fanabeazana mozika ho an'ny COVID miaraka amin'i Dante mandritra ny NAMM 2021 | NAB Show News | 2021 NAB Asehoy ny mpiara-miasa amin'ny Media sy ny mpamokatra ny Kat Show LIVE. Vaovao momba ny haino aman-jery
Home » Featured » Seminera Manolotra Fanadihadiana momba ny fampifanarahana ny fampianarana mozika ho an'ny COVID miaraka amin'i Dante mandritra ny NAMM 2021
Azo alaina ihany koa ny fiofanana amin'ny Dante AV sy Dante Certification Level 1 sy 2
Audinate dia manolotra seminera maimaim-poana mandritra ny NAMM 2021 momba ny lohahevitra hoe "Miverina amin'ny fanabeazana mozika sy fampisehoana mivantana matihanina." Ny seminera dia manadihady ny fomba ahafahan'i Dante manao karazana fampisehoana mivantana marobe eo am-pikojakojana ny elanelam-bahoaka sy ny fiarovana ny trano hipetrahana ho an'ny rehetra.
Azo jerena ihany koa ny topimaso vaovao momba ny vahaolana D-AV revolisionera vahaolana-over-IP avy any Audinate, ary ny Haavo 1 sy 2 an'ny Dante Certification Course malaza. Midika izany fa na aiza na aiza misy anao eto amin'izao tontolo izao, ary na inona na inona fahalalanao an'i Dante, dia afaka mahazo fiofanana sarobidy sy fahitana azo tsapain-tanana amin'ny fampiasana Dante amin'ny fidirana amin'ny AV-over-IP tena izy ianao.
Ny seminera sy ny fotoam-pampiofanana dia mandeha mivantana amin'ny 18 Janoary, na izany aza, ny horonan-tsary dia ho azo apetraka hatramin'ny volana feb. Ny fisoratana anarana ho an'ireo hetsika dia azo alaina ao amin'ny www.audinate.com/NAMM21
Miverina amin'ny fanabeazana mozika izao
Raha nanandrana nampiasa Zoom Meetings ho an'ny tarika na hiran'ny amboarampeo ianao dia fantatrao fa avo loatra ny fahatarana (latency) ny rafitra amin'ny fiaraha-miasa mozika. Afaka mifampihira ianareo fa tsy afaka miaraka manao fampisehoana. Saingy, tambajotram-pamokarana mivantana nandritra ny folo taona ny tambajotra Dante ambany latency ary afaka mamaha ny olana dieny izao.
Miaraha aminay hiady hevitra momba ny tantaran'ireo mpampianatra mpanabe mozika amin'ny ambaratonga faharoa sy anjerimanontolo izay mampiasa an'i Dante hampifandray ireo mpanakanto amin'ny toerana samihafa. Ireto misy tantara azonao alaina tahaka amin'ny fandaharana ataonao anio. Torohevitra momba ny fandrindrana ny habaka, ny fampifandraisana ireo habaka marobe mba handraisana ireo ensembles feno izay tsy tafiditra amin'ny efitrano tokana intsony, ary na dia ny fomba fividianana vola amin'ny tambajotran'ny campus aza dia horesahina.
Farany, hasehonay ny fomba hanohizan'ny tambajotra Dante izay aorinao hanompo eo amin'ny tontolon'ny valan'aretina ary ho lasa fitaovana mamorona fahafaha-manao fanabeazana vaovao.
Mampahafantatra Dante AV - Lahatsary ho an'ny vahaolana Dante
Dante no vahaolana amin'ny tambajotram-peo mitondra ny tontolon'ny feo, ary ankehitriny Dante AV dia mitondra horonantsary amin'ny sehatra. Miaraha aminay mandritra ny fotoana fiofanana momba ny tombontsoa azo avy amin'ny fampidirana am-peo sy horonan-tsary an'i Dante, ary jereo ny fampisehoana an'ity vahaolana vaovao mahatalanjona ity!
Haavo fiofanana Dante
Dante Certification ambaratonga 1: Dante no vahaolana tambajotram-pifandraisana AV manerantany ary ny fenitra de facto amin'ny feo matihanina ankehitriny. Ity kilasy ity dia manome fototra amin'ny hevitra audio, horonan-tsary ary tambajotra - ary mety izany ihany no takiana mba hanangonana sy hampiasana rafitra Dante kely amin'ny switch iray tokana. Aorian'ity fivoriana ity, ny mpanatrika dia tokony ho ampy fahaizana hamita ny Dante haavo 1 fanamarinana.
Dante Certification ambaratonga 2: Ity kilasy ity dia manohy amin'ny foto-kevitra fototra avy amin'ny Dante Certification Level 1, 2021 Edition. Ny mpanatrika dia hianatra ny fahaiza-manao amin'ny fananganana sy fampandehanana tambajotra Dante antonony sy lehibe manerana ny switch maro, miaraka amin'ireo tambajotra miverimberina ary mizara bandwidth amin'ny serivisy hafa. Aorian'ity fivoriana ity dia tokony ho ampy fahaizana ny mpanatrika mba hamita ny fanadinana Dante Haavo 2.
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny Audinate, tsidiho www.audinate.com
Momba ny Audinate Group Limited:
Audinate Group Ltd (ASX: AD8) dia manana vina hanentanana ny ho avin'ny AV. Dante AV nahazo ny mari-pankasitrahana an'i Audinate noho ny vahaolana tambajotra IP no mpitarika manerantany ary be mpampiasa amin'ny sehatry ny feo mivantana, fametrahana ara-barotra, fampielezam-peo, adiresy ampahibemaso ary orinasam-peo. Dante dia manolo tariby analogue nentim-paharazana amin'ny alàlan'ny fandefasana fambara audio sy horonan-tsary mifanaraka tsara amin'ny toerana lavitra, amin'ny toerana maro indray mandeha, tsy mampiasa afa-tsy tariby Ethernet. Ny Audinate dia manana foibe any Aostralia ary manana birao isam-paritra any Etazonia, United Kingdom ary Hong Kong. Ny vokatra teknolojia Dante dia misy vokatra avy amina mpanamboatra AV an-jatony erak'izao tontolo izao. Ny fizarana mahazatra an'ny orinasa dia amidy amin'ny Australian Securities Exchange (ASX) ambanin'ny kaody ticker AD8.
Dante sy Audinate dia mari-pamantarana voasoratra anarana ao amin'ny Audinate Group Ltd.
Previous: Streamland Media dia nanambara fikasana haka ny orinasa Technicolor aorian'ny Technicolor
Next: MTJIBS MAHAZO FITEHIRIZAM-BOKIN'NY APOSTOLY AZO ATAON'NY SITITAN'ASA